Mobilada ugu fiican ee ka yar 300 euro - Sebtember 2021 | Androidsis
Haddii aad ugaarsaneyso oo aad soo qabaneyso taleefan gacmeed wanaagsan oo raqiis ah, sidoo kalena miisaaniyaddaadu ay xadidan tahay laakiin wali waad awoodi kartaa wax ka badan moobil caag ah oo ay ka buuxaan kubbado nacnac ah, markaa waxaad timid meeshii saxda ahayd maxaa yeelay Maanta waxaan ku bixinaa Androidsis adiga liis ay ku jiraan qaar ka mid ah casriga ugu fiican xilligan, oo leh qiimaha ugu fiican ee lacagta iyo, wixii ka sarreeya, oo ayan u malaynaynin jeeb faaruqin.
Kuweena ka kooban kooxda Androidsis way hubtaa taas waxaa jira taleefan gacmeed qof walba. Ma ahan tan ugu qaalisan, mana aha tan ugu raqiisan. Ama waxaa laga yaabaa haa, ka dib oo dhan, taasi adiga ayey kugu xiran tahay. Laakiin sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan rabnaa inaad awood u yeelato inaad doorato taleefanka casriga ah ee ka jawaabaya baahiyahaaga iyo rajooyinkaaga sida ugu habboon uguna habboon sidaas darteed adigoon sidaa darteed ka gaabin cuntada bishaan. Marka, haddii aad raadineyso taleefan casri ah oo wanaagsan oo aad ku cusbooneysiiso lebenkaas aad jeebka ku qaadatid laakiin miisaaniyaddaadu ay xadidan tahay, halkan waad tagtaa mobilada ugu fiican wax ka yar 300 euro.
1 Xul aad u qaas ah
2 5-ta mobiil ee ugu fiican wax ka yar 300 euro
2.4 Sharaf 6C
3 Sida loo ilaaliyo mobiilkaaga cusub wax ka yar 300 euro
4 Astaamaha aasaasiga ah ee mobilada wax ka yar 300 euro ay tahay inuu lahaado
Xul aad u qaas ah
Maantana waanu ku keenay xulashada mobilada ugu fiican wax ka yar 300 euro, waana xulasho aad u qaas ah dhawr sababood awgood.
Marka ugu horeysa, waxaan wajaheynaa khad xarriiq ah oo si rasmi ah loogu yaqaan dhexdhexaad, inkasta oo ay jiraan kuwa tilmaamaya inay yihiin dhammaad-hoose (qalad weyn) ama heer hoose-hooseeya, ama dhexdhexaad dhexdhexaad hoose ah ... Xaqiiqaduna waxay tahay in kuwa badan ee kala-sarreeya ay ka bilaabmaan afar boqol oo euro iyo wixii ka sarreeya weli waxaa jiri lahaa mid kale, oo ah lacagta caymiska.
Marka la soo koobo, jahwareer dhab ah maxaa yeelay xaqiiqadu waxay tahay in tikniyoolajiyaddu ay aad u isbeddelayso oo aad u dhaqso badan tahay in runtu ay tahay in saddexda boqol ee mobilada gacanta aan ka heli karno kamarad leh astaamo isku mid ah kan lagu mideeyay shan boqol oo euro oo mobilo ah, si tusaale soo dhig. Waxaan ula jeedaa tan khadku hada waa mid cakiran iyo in Qiimaha laftiisa ayaan la mid ahayn tayada sare ama ka hooseysa kiisaska oo dhan, isagoo ah qiimaha lacagta iyo fulinta baahiyaheena gaarka ah waxyaabaha waaweyn ee ay tahay inaan marwalba tixgalino. markaad dooranayso mobiil cusub.
Dhinaca kale, dadka adeegsada taleefannada gacanta ee dhexdhexaadka ah ayaa laga yaabaa inay yihiin kuwa ugu taxaddar badan ee jira, tanina waa qaddarin shaqsiyeed, taasna waa taas, halka ay miisaaniyaddoodu kooban tahay oo ay doorbidayaan inayan hal milyan ku bixin, sidoo kale Waxay rabaan mobilo kasta. taleefan, sidoo kale ma doonayaan inay dib u cusbooneysiiyaan saddexdii jeerba mar. Taasi waa sababta ay ahmiyad gaar ah u siinayaan laba cabbir aasaasi ah: astaamaha iyo faa'iidooyinka ay tahay inuu mobiilkaaga cusub yeesho, iyo sida loo ilaaliyo moobilkaaga si uu u ahaado maalinta koowaad ee ugu dheer.
5-ta mobiil ee ugu fiican wax ka yar 300 euro
Iyo hadda oo aan ognahay waxa ay tahay inaan gaar ahaan u fiirsano iyo sida ugu wanaagsan ee loo ilaaliyo taleefannada casriga ah, aan aragno mobilada ugu fiican wax ka yar 300 euro. Maskaxda ku hay in xulkeenna aan isku daynay inaad ka soo iibsato Spain si aad ugu raaxeysato laba sano damaanad oo ay dejisay sharciga Yurub. Dhanka kale, qiimuhu wax badan buu isbedbeddelayaa sidaas darteed, haddii aad aragto mid ka mid ah moodelladan wax xoogaa ka qaalisan, ha baqin, malaha maalmo yar gudahood ayaa hoos u dhac kale ku dhici doonaa. Ma bilaabi karnaa?
Meizu looma yaqaan magac caan ah sida Xiaomi, Samsung ama Huawei, si kastaba ha noqotee waxay sidoo kale samaysaa niche muhiim ah suuqa galbeedka ee taleefannada casriga ah leh moodooyinka sidan oo kale ah. Meizu MX6, a casriga weyn, awood badan iyo waxqabad sare taasi kaama tagi doonto danayn la’aan.
Waxay leedahay shaashad ah 5,5 inji Full HD 1920 x 1080 (oo ku habboon daawashada taxanahaaga Netflix, fiidiyowyada YouTube iyo in ka badan), oo ah 20 GHz deca-core MediaTek Helio X3.6 processor, 4 GB oo ah xusuusta RAM iyo 32 GB oo kaydinta gudaha ah Waxaa intaa dheer, waxaad wax badan ka heli doontaa adiga 3.060 mAh baytariga si aad ugu raaxaysato Android 6 Marshmallow iyo kamaradeeda 12 megapixel maalintii oo dhan. Oo intaas oo dhammu waxay ka qiimo ka 268 euros.
Waan hubaa in sumadda Zuk ay "kuugu egtahay Shiine" adiga, si kastaba ha noqotee haddii aan kuu sheego inay tahay astaan ​​leh shaabadda Lenovo, markaas wax baa is beddelaya. Runtii, Zuk Z2ani wuxuu la yimaadaa tayada Lenovo waana taleefan casri ah ku habboon kuwa doonaya shaashad weyn, laakiin "iyadoon la dhaafin.
El Lenovo Zuk Z2 waxay na siisaa a 5 inch screen IPS oo leh xallinta 1080 x 1920 p oo la socota Android 6.0 Marshmallow. Gudaha, dhammaan awooda iyo waxqabadka waxaa bixiya Processor Snapdragon 820 Qualcomm quad-core 2,15 GHz oo ay weheliso muuqaallo Adreno 530 ah, 4 GB oo RAM ah iyo 64 GB oo keyd ah gudaha ah oo aan la ballaarin karin.
Qeybta fiidiyowga iyo sawir qaadista, a 13 megapixel kamarad weyn leh Samsung Isocell sensor iyo 8 megapixel hore.
Astaamaha ugu muhiimsan ee taleefannadan casriga ah waxaa dhammaystiray a 3.500 mAh baytariga, barometer, compass, sensor light jawiga, accelerometer, dareeraha dhawaanshaha, sensor fingerprint, 4G LTE isku xirnaanta, Dual SIM, Bluetooth 4.4, GPS, 3.5mm jack headphone iyo waxyaabo kaloo badan. Shaki la'aan, waxaan wajaheynaa mid ka mid mobilada ugu fiican wax ka yar 300 euro.
Waxaan ku sii wadeynaa xulkeenna taleefannada gacanta ugu fiican wax ka yar 300 euro tan BQ Aquaris X, taleefan casri ah oo ka socda shirkaddan Isbaanishka ah ee noo yimaada 5,2 inji shaashad HD buuxa ah iyo 2.5D Cruvo crystal iyo nidaamka hawlgalka Android Nougat taasi waxaa laga riixayaa gudaha a Octa-core Snapdragon 625 processor 2,2 GHz Qualcomm oo ay weheliso 3 GB ee RAM iyo a 32GB kaydinta gudaha Waxaan awood u yeelan doonnaa inaan ku ballaarinno adeegsiga kaarka microSD ee gaaraya 256 GB. Waxaas oo dhan oo ay la socdaan a 3.100 mAh baytariga iyadoo la adeegsanayo nidaamka 'Charge Quick Charge 3.0', a 16 megapixel kamarad weyn iyo hore 5 Megapixels. Qiimaheeda? Hareeraha 280 euros.
Mana iloobi karno tan cajiibka ah Sharaf 6C in aan ku heli karno kaliya 207 euro taasna waxay ku imaaneysaa shaashad ah 5 inches, Qualcomm sideed-processor processor MSM8940 oo ay weheliyaan 3 GB oo RAM ah iyo 32 GB oo keyd ah gudaha Android 6.0 Marshmallow hoosta EMUI 5.1 lakabaynta qaabeynta, 3.020 mAh baytariga, Kamaradda weyn ee 13 megapixel iyo kamaradda hore ee 5 MP, microSD iyo in ka badan.
Kaliya 209 euro waxaad ku heli kartaa waxyaabaha cajiibka ah Huawei P9 Lite Qaab dhismeedka biraha, mid ka mid ah taleefannada gacanta ee ugu fiican wax ka yar 300 euro oo ku siin doona wax weyn 5,2 inch screen oo leh xallinta Full HD, nidaamka hawlgalka Android 6.0 Marshmallow, processor sideed-core, 2GB RAM, keyd 16GB ah gudaha lagu ballaarin karo iyada oo loo marayo kaarka microSD, dareeraha faraha, 13 MP kamaradda weyn, f / 2.0 iyo diiradda tooska ah, tooshka LED, 3.000 mAh baytariga Taas oo aad ku sii socon karto maalinta oo dhan iyo wax ka badan.
Qaabkan waxaan ku joojiney xulkeenna taleefannada gacanta ee ugu fiican wax ka yar 300 euro. Sida iska cad, iyagu ma aha kuwa kaliya tan iyo markii dalabku ku kala duwan yahay qiimahan uu aad u ballaaran yahay oo aad u kala duwan yahay; Waxaan sidoo kale xusi karnaa Nubia N1, ZTE Axon 7 Mini, ZTE Blade V8, Nubia M2 Lite, iyo xitaa Nokia 6 iyo dabcan Xiaomi Mi 5S si kastaba ha noqotee, xulasho waa in la sameeyaa, waana xulashada kuwa laga yaabo inay kuwa ugu fiican yihiin, ee aan wada aheyn, sidaa darteed waan balaarin doonnaa oo aan cusbooneysiin doonaa, ee la soco oo ha moogaan
Sida loo ilaaliyo mobiilkaaga cusub wax ka yar 300 euro
Iyadoo aan loo eegin heerka ilaalinta ee ka hortagga biyaha iyo boodhka ay moobiilkeennu soo bandhigaan, iyo xitaa iyadoon loo eegin maaddada lagu soo saaray (asal ahaan, bir, aluminium iyo / ama galaas), moobaylkeenu waa jajaban yahay, kamana furna shilalka daqiiqad kastana waa la'aantood. Si tan looga fogaado, waa inaan qaadnaa tallaabooyin gaar ah:
Isticmaal dabool difaac wanaagsan, kaas oo ilaaliya dhammaan dhinacyada iyo xaglaha qalabka, doorbidayaa walxaha sida silikoon, caag, TPU maaddaama ay yihiin kuwo waara, qalabka adkaysi u leh oo si fiican u nuugaya saamaynta. Iyo haddii aad u muuqato inaad ku jirto "xaaladaha waxyeellay", dooro dabool buuxa. Waa maalgashi yar oo aad lacag badan ku keydin karto.
Shaashadda keydiyaha had iyo jeer, iyo muraayad qabow. Runtii ma loo baahan yahay in la sharaxo sababaha?
Ka carar jawiga iyo xaaladaha halista ah sida musqusha, jikada iyo wixii lamid ah. Hadana haddii aad tagto xeebta ama barkadda, ha u dhaafin qorraxda oo ha isticmaalin dabool aan biyuhu ka soo bixin (xitaa boorsada "zip" ee cuntooyinka fudud ayaa xal fiican u ah xaaladahaas).
Astaamaha aasaasiga ah ee mobilada wax ka yar 300 euro ay tahay inuu lahaado
Markii aan go'aansanno waxa miisaaniyaddeennu tahay, waa in aan lagu hoggaaminin dhinacyo aan khusayn sida astaanta, laakiin lagu tilmaamayo astaamo gaar ah oo muhiim ah iyo isticmaalka aan siin doonno. Marka, markaad dooranayso taleefan casri ah oo cusub waa inaan fiiro gaar ah u yeelanaa dhinacyada soo socda:
Shaashad: cabbirka iyo tayada. Haddii aan aragno waxyaabo badan oo ka kooban noocyo badan oo warbaahin ah ama haddii aan dhibaato xagga aragtida ah ka helno, waxaan u baahan doonnaa shaashad ballaaran oo xallin sare leh, haddii kale, waxaa laga yaabaa inaan doorbidno taleefan ku habboon calaacasha gacanta.
Awooda iyo waxqabadka. Adeegsiga "caadiga ah" (internetka, shabakadaha bulshada, emaylka ama qaar ka mid ah ciyaaraha aasaasiga ah) ficil kasta oo ka badan 1 GB oo RAM ah oo leh processor wanaagsan ayaa ku filnaan doona. Laakiin haddii aan ruxeyno ciyaaro culus oo muuqaallo cajiib ah wata, markaa waxaan u baahan doonnaa awood dheeri ah.
Muuqaal. Maalmahan dhammaantayo waxaan qaadannaa xamuul badan oo sawirro iyo fiidiyowyo ah, in kastoo aynaan xirfadlayaal ahayn, haddana waa xusuusno aan jecel nahay inaan ku keydinno tayada ugu sareysa. Sababtaas awgeed, waa inaad fiiro gaar ah u yeelatid, ka sarreeya dhammaan, kamaradda weyn, oo awood u leh inay bixiso sawirro tayo sare leh, laakiin iska jir, maxaa yeelay wax walbaa ma ahan megapixels.
Kaydinta. Hubso inaad haysato keyd ku filan oo loogu talagalay codsiyada ama moobilkaaga ayaa bilaabi doona inuu gaabis noqdo. Inta hartay (muusikada, fiidiyowyada, sawirrada ...) waxaad ku keydin kartaa kaarka xusuusta dibedda haddii aad rabto.
Batariga. Aasaasiga ah ayaa ah haddii aad waqti badan ku qaadato guriga ka dib, hubi in mobilkaagu haysto batteri kugu filan si aadan u raadinaynin meel kasta oo fiilooyin ah ama aad ku buuxiso koronto.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobilada ugu fiican wax ka yar 300 euro
Fadlan, markasta oo aad ku talisid taleefan shiineys ah, waxa ugu muhiimsani waa in la dhaho hadduu ku yimaado Isbaanishka oo uu keenayo Play Store….
Waa inaad ogaataa in kuwa raacsan ay yihiin Isbaanish taasna waa waxa ugu muhiimsan, ixtiraam buuxa, salaan iyo mahadsanid hore
Waad salaaman tahay Luriber. Maanaan dooran wax taleefanno Shiine ah, dhammaantood waa la wada yaqaan oo lagu iibiyaa Spain. Dhammaantood waxaa lagu iibiyaa Amazon gudaha Isbaanishka sidaa darteedna waa inay ku jiraan nidaamka hawlgalka ee Isbaanishka. Haddii kale, oo AAN AHAYN inay ku dhacaan sababo muuqda awgood, waxaad had iyo jeer ku soo celin kartaa lacag la’aan. Marka laga hadlayo mid ka mid ah taleefannada casriga ah ee la soo jeediyey, BQ Aquaris X, waxay ku socotaa iyada oo aan la sheegin in BQ ay tahay shirkad Isbaanish ah. Hase yeeshee, waa kormeer wanaagsan oo ay tahay inaan marwalba maskaxda ku hayno sidii isticmaale ahaan. Dhamaan wanaag !!!
Motorola waxay soo bandhigtay Moto 360 Camera module oo loogu talagalay qalabka Moto Z
Netflix waxay kor u qaadi kartaa qiimaha dhammaan qorshayaasheeda hadda